Talyaaniga: 3 qof oo soomaali ah oo laga helay hargabka Corona-Virus. - NorSom News
Talyaaniga: 3 qof oo soomaali ah oo laga helay hargabka Corona-Virus.
Sida ay sheegeen dhakhaatiir soomaali ah oo ka howlgala Woqooyiga dalka Talyaaniga, inta la xaqiijiyay ilaa 3 qof oo Soomaali ah ayaa laga helay hargabka Coronavirus oo aad ugu faafay woqooyiga dalkaas.
Abuukar Nuur Xuseen oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala gobolka Lombardia ee dalkaasi Talyaaniga ayaa warbaahinta soomaalida uga warbixiya xaaladda guud sida ay tahay, kadib wareysi gaar ah oo uu siiyey TV-ga Universal.
Dr Abuukar ayaa xaqiijiyey in illaa iyo hadda cudurka Coronavirus uu haleelay illaa saddex qof oo Soomaali ah, kuwaas oo uu tilmaamay in labo ka mid ah ay ku nool yihiin magaalada caasimada ah ee Rome, halka qofka saddexaad uu joogo gobolka Lombardia.
Dalka Talyaaniga ayaa sidoo kale noqday wadanka saddexaad ee uu sida daran u saameeyey Coronovirus, waxaana la sheegay inay ku dhinteen 197 qof, iyadoona uu cudurku haleelay in ka badan 4600 oo qof, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka.
Previous articleTurkiga oo xabsi iyo tarxiilis isugu daray gudoomiyaha xisbiga xagjirka fog ee Sweden.
Next articleFHI: Ilaa hada tiradan ayaa Norway laga helay hargabka Corona-Virus.